Impahla Umshwalense eRussia kule minyaka emihlanu edlule uqalile ukuthuthukisa ikakhulukazi ngokushesha. umshwalense zokuzithandela isiba inkonzo kuthandwa. umshwalense Impahla kusiza ukuvikela izimo, uma impahla ukuthi kukhona okuzokwenzeka uma kwenzeka umlilo, ukweba, inhlekelele yemvelo, njll umshwalense Esifike Ngesikhathi kulokhu uyakwazi ngokuvikela ngokumelene ukulahlekelwa kwezimali.
Abantu bangase ungene inkontileka yomshuwalense ukuze kuvikeleke zokuhlala, amakhaya, mortgages and izivumelwano zomshuwalense isihloko.
Lapho insuring ukuvikelwa ezindlini sihlinzekela amacala imililo, izikhukhula, ukugqekeza, ukubamba inkunzi kanye nezinhlekelele zemvelo. Phezu elivela kuzo isimo umshwalense, inkampani yomshuwalense okhokhela izindleko yomshuwalense ekhaya. Awukwazi ukuthathelwa umshuwalense lonke efulethini wonkana, futhi izingxenye zayo ngazinye, isibonelo, kuphela kube sekupheleni.
Lapho insuring ikhaya ukuwa ngaphansi lo mqondo, noma isiphi isakhiwo ezindaweni ezisemadolobheni nezisemakhaya. Njengoba esimweni sangaphambilini, ungakwazi ukuthathelwa umshuwalense noma iyiphi ingxenye impahla: landscape design, umhlobiso ingaphakathi, kwakudala, njll
umshwalense Mortgage inikeza usizo ukusebenza credit izibopho ebhange uma ukulahlekelwa imali evamile nge ukukhubazeka, izindleko ezingalindelekile, ukulahlekelwa noma izivimbelo amalungelo impahla nezindlu ezithengiswayo.
umshwalense Isihloko iklanyelwe ukunikeza isivikelo umshwalense uma ukulahlekelwa amalungelo endawo, uma umuntu engena kuthengiselana limenyezelwe emthethweni ngenxa izenzakalo ezazingaziwa kuye ngesikhathi sesiphelo sesimiso inkontileka. Lolu hlobo umshuwalense ofanele ngosuku olwandulela ukuthengwa ingcebo.
Ibhizinisi njalo elihlobene ne izingozi. Kuyinto sici amabhizinisi ezinkulu ezimbonini kanye namafemu encane. izimo ezingalindelekile kungabangela umonakalo elisemqoka kuya inkampani, kuze kube ukulahlekelwa ibhizinisi. Ezinye zalezi izingozi kungenzeka kusengaphambili kuphela kodwa futhi ukusithatha ngesikhathi esifanele zokunciphisa yabo. izinkampani zomshuwalense Impahla nezinhlangano (izinhlangano ezingokomthetho) okungavikelwa uma kwenzeka ukulahlekelwa noma ukulinyazwa kwempahla kanye impahla aqashiwe futhi kwezinye izimo.
Impahla umshwalense amabhizinisi enkulu, medium and encane zihlanganisa umshwalense impahla elibekwe umlilo nezinye izingozi, ukulahlekelwa umshwalense kusuka iziphazamiso ekukhiqizeni, imishini kanye nezinye izinto kwi iloli ukukhiqizwa, izingozi ukwakhiwa wezimpahla, isihloko kanye umshwalense namabhizinisi athintene nezolimo.
Izinhloso umshwalense kukhona isakhiwo, isakhiwo ipulazi, ukwakhiwa, ukwakhiwa kuyaqhubeka, izinto, izimpahla, izinto zokusetshenziswa, zinsiza, nezitebele zamahhashi, izitolo, nezitebele zamahhashi, umhlobiso kwezakhiwo kanye nezakhiwo, izimpahla ezisebenza ngogesi, izinto zikagesi, njll umshwalense Impahla sihlinzekela amacala izenzo kabi besithathu sekubusa imililo, amatheku, ukuqhuma, kanye nezimo zemvelo bemvelo ezifana umbani, izimvula, isichotho, iziphepho, ukuzamazama komhlaba, njll
I umshwalense inikeza Ukuhlanganisa for izingozi futhi yakhelwe ukuvikela izimpahla amabhizinisi kanye nezinhlangano. Ekuphetheni izivumelwano zomshuwalense kunakwe imininingwane inkampani futhi izici ezingase zibe nomthelela omubi ukuphepha impahla ibe inhlangano engokomthetho. Inkontileka kuphothulwe ngo kohlaka inani izimali inkampani noma inkampani esifisa ukusichitha umshwalense. Khokha amasevisi umshwalense kungenzeka isamba semali noma isitolimende uhlelo.
Inani umshwalense lulotshiwe kuleso sakhiwo, noma umbiko wekomidi uchwepheshe.
Okulindile isiphelo sesimiso inkontileka enkampanini yomshuwalense unelungelo ukuhlola ulwazi mayelana impahla kanye ukuhlola isimo inani layo langempela. Ngesikhathi esifanayo lo izinkampani zomshuwalense iqinisekiswe ukuba khona amafa ikheli ingozi ukuthenga value, ukuphila service, kanye nezinye izici. Izindleko umshwalense for nezinhlangano ezingokomthetho esungulwe ngamunye. Ngokuvamile, it zokhahlamba kusuka 0.1% kuya ku-6% komhiaba oVikelwe.
Le nkampani "PPF Umshwalense wempilo": Izibuyekezo ikhasimende
"Rosgosstrakh":-Google + ku-izinkampani zomshuwalense. impendulo kwamakhasimende mayelana NPF "Rosgosstrakh"
"RESO-Isiqinisekiso": Izibuyekezo Inkampani
Lubhekele CTP sekwephuzile. Ngingaba gibela oluvelele umshwalense MTPL? Ngingaba ukuvuselela inqubomgomo aphelelwe yisikhathi MTPL?
Umthetho Umshuwalense: civil isibopho sezomthetho umshwalense umqondo abantu wahlanganyela emsebenzini okhokhelwayo
Inkampani yomshuwalense Ingosstrakh. Izibuyekezo amaklayenti kanye nabo ebhizinisini
Daughter of umlingisi odumile Anastasia Safonov imodeli isakhiwo umsebenzi
I-Pavel Kornev: ukubhalwa kwemibhalo kanye nempendulo evela kubafundi
Ikontraga ithemba ukuphathwa kwempahla. ukuphathwa Asset - kuba ...
Non-Stop: nabalingisi. Liam Neeson e indima Bill Marx
Ukuphumula okungahambisani nanjengoba "okugqamile" kwezwe lanamuhla. Amabhishi aseNudist aseYurophu
Isidakamizwa "i-Zorex". Imiyalo yokusetshenziswa
Fluid for ugwayi electronic Joyetech - ukuhlukahlukana nezici
Izimfihlo umdobi: donk ku carp
Ukuhluleka olunamandla kwezinso
Flashlight kubafuni-1102: incazelo, ukubuyekezwa
Ukuhlobisa izigqoko zokugqoka: indlela yokwenza isithombe somuntu oqalayo
Indlela ukukhetha nogologo? Lokho ingxenye nogologo?